အင်ဒရိုမီဒါ ၄ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 00h 42m 32.3s, +40° 34′ 19″
ဟာဘယ် အာကာသ တယ်လီစကုပ်မှ အင်ဒရိုမီဒါ ၄
00° 42′ 32.3″
အင်ဒရိုမီဒါ ၄ သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော သီးခြားဂလက်ဆီပုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် Local Group အပြင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်ဟုလည်း အချို့က စောဒကတက်ကြသည်။ ကမ္ဘာမြေမှ အလင်းနှစ် ၂၂ မှ ၂၄ မီလီယံကြားအကွာအဝေးတွင် တည်ရှိသည်။ ဟာဘယ် အာကာသ တယ်လီစကုပ်၏ လေ့လာချက်များအရ ယင်းသည် အထီးကျန်သော ဂလက်ဆီပုဖြစ်ရမည်ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းသည် အင်ဒရိုမီဒါ ဂယ်လက်ဆီနှင့် လုံးလုံး မနီးကပ်ပေ။ ဂလက်ဆီသည် သီးခြားရပ်တည်လျက်ရှိပြီး Holmberg အချင်းသည် ၁၈၈၀ parsec ရှိသည်။ သို့သော် သဘာဝ အော်တော့မစ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့သည် ချပ်ပြားအပြင်ဘက်သို့ ၈ ဆခန့် ကျယ်ပြန့်သည်။ ဂလက်ဆီသည် အင်မတန် မည်းမှောင်လှပြီး ဘာရွိင်နစ်မှ အနက်ရောင်အရာဝတ္ထု အချိုးသည် ၀.၁၁ ရှိသည်။
ဂယ်လက်ဆီအား Sidney van den Bergh ဆိုသူမှ ၁၉၇၂ တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ ၁.၇ NASA/IPAC Extragalactic Database။ Results for Andromeda IV။ 2007-03-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ferguson (2000). "On the nature of Andromeda IV". The Astronomical Journal 120 (2): 821–832. doi:10.1086/301485. Bibcode: 2000AJ....120..821F.
↑ Andromeda IV turns out to beasolitary gas-rich dwarf galaxy (22 December 2015)။ 25 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Karachentsev, I. D.; Chengalur, Jayaram. N.; Tully, R. B.; Makarova, L. N.; Sharina, M. E.; Begum, A.; Rizzi, L. (2015). Andromeda IV,asolitary gas-rich dwarf galaxy. Unknown parameter |eprint= ignored (help); Unknown parameter |class= ignored (help)
↑ McConnachie, A. W. (2005). "Distances and metallicities for 17 Local Group galaxies". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 356 (4): 979–997. doi:10.1111/j.1365-2966.2004.08514.x. Bibcode: 2005MNRAS.356..979M.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အင်ဒရိုမီဒါ_၄&oldid=407025" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၀၉:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။